Qoraalkan asturnaanta waxaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay 28/06/2021 wuxuuna khuseeyaa muwaadiniinta iyo deganayaasha sharciga ah ee joogtada ah ee Aagga Dhaqaalaha Yurub.
Bayaankan asturnaanta waxaan ku sharaxeynaa waxa aan ku sameyno xogta aan kaa helno adiga https://comme-un-pro.fr. Waxaan kugula talineynaa inaad si taxadar leh u aqriso bayaankaan. Markaan shaqeyneyno, waxaan u hoggaansameynaa shuruudaha sharciga asturnaanta. Tan macnaheedu waa, iyo waxyaabo kale, in:
waxaan si cad u muujineynaa ujeedooyinka aan ugu shaqeyno xogta shaqsiyeed. Waxaan tan ku samaynaa iyada oo loo marayo bayaanka asturnaanta;
waxaan higsaneynaa inaan ku xadidno ururinta macluumaadka shakhsi ahaaneed kaliya macluumaadka shakhsiyeed ee lagama maarmaanka u ah ujeedooyinka sharciga ah;
waxaan marka hore weydiisaneynaa ogolaanshahaaga cad ee aan ku shaqeyneyno xogtaada shaqsiyeed kiisaska u baahan ogolaanshahaaga;
waxaan qaadnaa talaabooyin amniga ku habboon si aan u ilaalino xogtaada shakhsi ahaaneed, waxaana u baahanahay isla dhinacyada ka shaqeynaya xogta shaqsiyeed annaga;
waxaan xushmeynaa xuquuqdaada inaad aragto, saxdo ama tirtirto macluumaadkaaga shaqsiyeed haddii aad sidaas codsato.
Haddii aad wax su'aalo ah qabtid ama aad jeceshahay inaad si sax ah u ogaato xogta aan haynno, fadlan nala soo xiriir.
1. Ujeeddo, xog iyo muddada haynta
1.1 Uruurinta iyo falanqaynta tirakoobka hagaajinta bogga.
Ujeedadaas awgeed, waxaan u isticmaalnaa xogta soo socota:
Saldhigga aan ku shaqeyn karno xogtaan waa:
Oggolaansho la helay
Mudada wada hadalka
Waxaan xafideynaa xogtaan ilaa dhamaadka adeega.
1.2 Inay awoodaan inay soo bandhigaan badeecooyin iyo adeegyo shaqsiyan ah
2. Wadaagista dhinacyada kale
Waxaan kaliya la wadaageynaa xogtaan processor-yada iyo dhinacyada kale ee seddexaad ee ogolaanshaha maadooyinka xogta ay tahay in la helo. Tani waxay khuseysaa qaybaha (yada) soo socda:
Ujeedo: iskaashi ganacsi
Xogta: Macluumaadka laxiriirta badmaaxnimada iyo ficilada laga fuliyay goobaha lamaanaha.
Websaydhadeenu waxay isticmaashaa cookies. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan cookies, fadlan tixraac annaga Siyaasadda cookies.
Waxaan la soconaa tirakoobyada qarsoodiga ah si aan fikrad uga helno inta jeer iyo sida booqdayaashu u adeegsadaan websaydhkeena.Ku darista cinwaanada IP oo buuxa anaga ayaa xannibay.
Waxaa naga go'an amniga xogta shaqsiyadeed. Waxaan qaadnaa talaabooyin amni oo habboon si aan u xadidno xadgudubka iyo gelitaanka aan la oggolaan ee macluumaadka shakhsiyeed. Tani waxay xaqiijineysaa in kaliya dadka lagama maarmaanka u ah ay heli karaan xogtaada, in helitaanka xogta la ilaaliyo iyo in tallaabooyinkeena amniga si joogto ah dib loogu eego.
6. Websaydhada saddexaad
Bayaanka asturnaantaani ma khuseeyo websaydhada dhinac saddexaad oo ku xiran xiriiriyeyaasha degelkeenna. Ma dammaanad qaadi karno in dhinacyadan saddexaad ay u maareeyaan xogtaada shakhsiyeed qaab lagu kalsoonaan karo ama ammaan ah. Waxaan kugula talineynaa inaad aqriso hadalada asturnaanta ee degelladan internetka kahor intaadan isticmaalin.
7. Isbedelada bayaankan asturnaanta
Waxaan xaq u leenahay inaan wax ka beddelno bayaanka asturnaanta. Waxaa lagugula talinayaa inaad si joogto ah ula tashato bayaanka asturnaanta si aad uga feejignaato wixii isbeddel ah ee suurtogalka ah. Intaas waxaa sii dheer, waxaan si firfircoon kuu ogeysiin doonaa markasta oo ay suurtagal tahay.
8. Soo gal oo wax ka beddel xogtaada
Haddii aad wax su'aalo ah qabtid ama aad jeceshahay inaad ogaato xogta shakhsiyeed ee aan kaa hayno, fadlan nala soo xiriir. Waxaad nala soo xiriiri kartaa adoo adeegsanaya macluumaadka hoose. Waxaad leedahay xuquuqda soo socota:
Hubso inaad markasta caddeyso cidda aad tahay, si aan u hubinno inaanan beddelayn ama tirtirin xogta qofka qaldan.
9. Cabasho samee
Haddii aadan ku qanacsaneyn sida aan u maareeyno (cabashada ku saabsan) ka shaqeynta macluumaadkaaga shaqsiyeed, waxaad xaq u leedahay inaad dacwad u gudbiso hey'adda ilaalinta xogta.
10. Sarkaalka ilaalinta xogta
Sarkaalkayaga ilaalinta xogta wuxuu ka diiwaan gashan yahay hey'adaha ilaalinta xogta wadan xubin ka ah EU. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah ama codsiyo ah oo ku saabsan bayaanka asturnaanta ama Sarkaalka Ilaalinta Macluumaadka, waxaad la xiriiri kartaa Tranquillus, adoo u maraya ama tranquillus.france@comme-un-pro.fr.
11. Faahfaahinta xiriirka